ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ရှက်တယ်
အယုဒ္ဓယက ဘုရားပျက်ကို လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့
နင်တို့ဗမာ ဖျက်ခဲ့တာလို့ ပြောတဲ့ဆရာ
စစ်ပွဲမှာ မတော်တဆဖြစ်ခဲ့တိုင်း တို့ဗမာ မရိုင်းစိုင်း လို့
မျက်စိထဲ ပြန်မြင်ယောင်မိတိုင်း ရှက်တယ်။
နင်တို့ဗမာတွေ အာရှမှာ နာမည်ကြီးခဲ့သမျှ
အတန်းထဲက နိုင်ငံခြားသားအတန်းဖော်တွေ မေးတာခံရတိုင်း ရှက်တယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက် အာရှတလွှားမှာ စွာကျယ်
ရောက်လေရာမှာ မာန်ဝင့်ခဲ့တဲ့ နင်တို့ဗမာတွေ
နိုင်ငံလိုက် ၀ဋ်လည်ပြီလို့ ပြောခံရတိုင်း ရှက်တယ်။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ၊ သံသရာမှ ထွက်မြောက်ကြောင်း ၀ိပဿနာ
နေလိုထွန်းတောက်လို့ တကမ္ဘာလုံးက စံထားရသတဲ့
သာသနာသန့်ရှင်းရေး အစွမ်းကုန် အားထုတ်ခဲ့တယ်
သာသနာ့ဝန်ဆောင် ဘုန်းဘုရားများ ဆည်းကပ်ပါလို့ ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်
သာသနာစည်ပင်ကြောင်း သံဃတက္ကသိုလ်ကို ပိတ်ခိုင်း၊
သံဃာ့ မဟာနာယက အဖွဲ့ကို ဖျက်ခိုင်းသတဲ့
သံဃာကို သတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာကိုလဲ
ငြင်းမရအောင် သက်သေကျန်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်
ဗမာဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူစရာ မကျန်တော့.. ရှက်ပြီးရင်း ရှက်ရတယ်။
အဟိံသလမ်းစဉ်ကိုလက်ကိုင်ထား အသည်းကြွေမတတ်သည်းခံငြားလည်း
ရာထူးအာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအတွက် တွေ့ရာလူကို ထိုးကျွေး
သည်တစ်ခါ ကျွန်မ ဈေးမဆစ်တော့ဘူး….
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 4:44 AM
i am crying while i am reading your poem. it is suchashame for all of us.
we have no national pride left.
but i believe we can make it to be free.